IVilla Caro yiVilla yesintu elungiswe kakuhle enechibi elikufutshane neNoto, idolophu enomtsalane kunye nesiza selifa lehlabathi le-UNESCO, eyaziwa ngokuba "likomkhulu leBaroque yaseSicilian". I-Villa ngoku iveza izinto zangaphakathi eziqaqambileyo ezithatha i-8 kubuntofontofo.
IVilla Caro yiVilla yesintu elungiswe kakuhle enechibi elikufutshane neNoto, idolophu enomtsalane kunye nesiza selifa lehlabathi le-UNESCO, eyaziwa ngokuba "likomkhulu leBaroque yaseSicilian". I-Villa ngoku iveza izinto zangaphakathi eziqaqambileyo ezithatha i-8 kubuntofontofo. Iindawo ezingaphandle ze-villa zibandakanya iindawo ezivulekileyo, i-terraces enelanga kunye ne-pool enhle.
Indawo esebenzayo yeVilla Caro ibekwe kakuhle ukuze ujonge indawo enomtsalane ejikelezileyo. I-Syracuse kunye ne-Ortigia, i-Modica, i-Ragusa kunye nezinye iidolophu ze-Noto Valley, i-villa yaseRoma yaseTellaro, i-Marzamemi kunye neendawo zokugcina indalo zeCavagrande del Cassibile kunye neVendicari zonke zikude ngeekhilomitha ezimbalwa.
Ngaphandle kweVilla Caro
Idama lokuqubha labucala - 14m x 6m ichibi lokuqubha, ubunzulu 1.20m - 2.20m, ikona ye-hydro massage. Ukungena kwinqanaba laseRoma. Ivulwa nge-1 kuEpreli-31 kaOkthobha
I-Sun terrace - indawo egangathiweyo yokutshisa ilanga ene-sunbeds kunye ne-parasols
Indawo yokutyela - itafile kunye nezihlalo, izihlalo zebhentshi zamatye
Ikhitshi langaphandle-iRustic, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-oveni evuthayo
Igumbi lokuhlamba - umatshini wokuhlamba kunye nesomisi
Ishawari yangaphandle-ishawari ecaleni kwechibi
Igadi - igadi egcinwe kakuhle enengca kunye nemithi enomthunzi
Ngaphakathi kweVilla Caro
Igumbi lokuhlala - iisofa ezitofotofo, iTV, iingcango zepatio ukuya kwindawo egqunyiweyo. Iyunithi yomoya
Indawo yokudlela - itafile kunye nezitulo.
Ikhitshi - isitovu segesi, i-oveni yombane, ifriji / isikhenkcisi, iingcango zepatio yomatshini wokuhlamba izitya ukuya kwindawo esecaleni. Itafile yesidlo sakusasa kunye nezitulo.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini-ibhedi ephindwe kabini, iingcango zaseFransi kwi-terrace. Iyunithi yomoya
Igumbi lokuhlambela eligcweleyo-ikona yokuhlambela eneshawa phezu kokuhlambela, isitya sesandla, iWC
Igumbi lokulala eliphindwe kabini-ibhedi ephindwe kabini, iingcango zaseFransi kwibalcony. Iyunithi yomoya
Igumbi lokulala elinamawele - ibhedi ephindwe kabini, iifestile ukuya egadini. Iyunithi yomoya
Igumbi lokulala ezimbini - iibhedi ezi-2 ezingatshatanga, iifestile ukuya egadini. Iyunithi yomoya
Igumbi lokuhlambela - ishawa, isitya sezandla, iWC,
I-villa yakho iya kulungiselelwa ukufika kwakho kunye neebhedi ezenziweyo.
Ilinen yokulala - itshintshiwe ngeveki
Iitawuli zendlu - zitshintshwa kabini ngeveki
Iitawuli zephuli - zitshintshwe ngeveki
Igumbi lokulala kunye nokucoca igumbi lokuhlambela - ngeveki
Indawo yokupaka - emabaleni.
Umbane - Usetyenziso olungaphezulu komndilili wama-300 Kwh ngeveki, lubizwa nge-euro 0.40/kwh
Kukho iDiphozithi yoKhuseleko ye-500 euro
QAPHELA Ngena/Jonga iinkcukacha
Ukungena: 16:00 - 21:00
Ukuphuma: 08:00 - 10:00
Ukufika emva kwexesha: 21:00 - 24:00, ukuba kuvunyelwene, kuhlawuliswe i-Euro 30
IVilla Caro ibekwe kakuhle ukuze ujonge indawo ejikelezileyo. ISirakuse kunye ne-Ortigia, iRagusa, iModica kunye nezinye iidolophu ezikwiNoto Valley zikude zonke iikhilomitha ezimbalwa kunye nendlu yaseRoma yaseTellaro, iMarzamemi kunye neendawo zokugcina indalo zaseVendicari kunye neCavagrande del Cassibile.
Kukho i-arhente yasekuhlaleni eya kunceda ngazo naziphi na iimfuno. Kananjalo uya kuba nenombolo yoqhagamshelwano yeyure ezingama-24 yase-UK kaxakeka.